Duqa Muqdisho oo loo magacaabay hogaamiye kooxeed hore – Puntland Post
Posted on August 22, 2019 August 22, 2019 by Liban Yusuf
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho u magacaabay Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) oo ka mid ahaa hoggaamiye kooxeedyadii Muqdisho.
Qoraal ka soo baxay Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu yiri “Anigoo xeerinaya baahida loo qabo in guddoomiye uu yeesho Maamulka Gobolka Banaadir, si loo sii amba qaado qorsheyaashii horumarineed ee socday, sidoo kalena tixgelinaya soo jeedinta kala duwan iyo waayo-aragnimada uu Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) uu u leeyahay gudashada waajibadka xilkan ayaan ugu magacaabay.”
Cumar Filish ayaa bedelaya Allaha u naxariistee Eng. Yariisow oo lagu dilay qarax bishii la soo dhaafay ee July ka dhacay xarunta gobolka Banaadir.
Mudane Cumar Filish ayaa ahaan jiray hoggaamiye kooxeed caan ka ah Muqdisho, markii horena ka fallaagoobay Muuse Suudi Yalaxow.